Oli Baaquli Saytuun - Joornaalka Naqshadeynta
Baaquli Saytuun OLI, oo ah shey muuqaal ahaan ugu yar, ayaa looray iyadoo lagu saleynayo hawsheeda, fikradda ah in lagu qariyo godadka ka imanaya baahi gaar ah. Waxay raacday indha indheynta xaaladaha kala duwan, fool xumada ee godadka iyo baahida loo qabo in kor loogu qaado quruxda saytuunka. Sidii baakad laba-ujeedo ah, Oli waxaa loo abuuray si marka la furo ay u xoojiso qodobka la yaabka leh. Naqshadeeyayaasha waxaa ku dhiirrigeliyay qaabka saytuunka iyo fudeydkiisa. Xulashada boodhku waxay kuxirantahay qiimaha maaddada lafteeda iyo isticmaalkeeda.
Magaca mashruuca : Oli, Magaca naqshadeeyayaasha : Miguel Pinto Félix, Magaca macmiilka : MPFXDESIGN.
Baaquli Saytuun Miguel Pinto Félix Oli